Umphumela we- "heat island" uzophinda kabili izindleko zasemadolobheni zokushintsha kwesimo sezulu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Umphumela we- "heat island" uzophinda kabili izindleko zasemadolobheni zokushintsha kwesimo sezulu
Ezweni eliya ngokugcwala, izindawo ezimbalwa eziluhlaza ezisele zithathelwa indawo ngukhonkolo futhi zivimbele izindawo ezibukeka kahle; hhayi ngeze, sonke sifuna okungenani ifulethi elilodwa lapho singahlala khona. Kodwa-ke, inani labantu basemadolobheni landa ngokushesha, futhi ngokwenza lokho idolobha lethu liba yilokho okwaziwa ngokuthi »isiqhingi sokushisa emadolobheni».
Kepha inkinga ayigcini lapho, kepha yile mizi eshisiwe kuzoba nezindleko zesimo sezulu eziphakeme kakhulu ukwedlula lezo ezingekho, ngokusho kocwaningo olushicilelwe ephephabhukwini elithi "Isimo Sezulu Semvelo."
El ukutadisha, lapho kwahlaziywa khona amadolobha ayi-1692, kubonisa lokho imiphumela yokuguquka kwesimo sezulu ingabiza iziqhingi zokushisa zasemadolobheni izikhathi eziphindwe ka-2,6 ngaphezuluNjengoba lo mphumela ungadala ukuthi izinga lokushisa lenyuke ngama-degree amabili ngonyaka ka-2050. Vele, uma kushisa kangako, i-air conditioning isetshenziswa kakhulu futhi, kaningi, kuncanyelwa ukuthatha imoto ngaphambi kokuhamba. Sekukonke, esikwenzayo ukunciphisa izinga lomoya namanzi, okuholela ekuguleni okwengeziwe nasekufeni ngaphambi kwesikhathi.
Ngakho-ke, ababhali balo msebenzi, ososayensi abavela eNyuvesi yaseSussex (e-United Kingdom), eNational Autonomous University of Mexico nase-University of Vrije (Amsterdam), bathi kulula ukukhetha ukufaka uphahla nezindawo ezibonisa ukukhanya kwelanga, kanye nokwandisa izindawo eziluhlaza emadolobheni.
Amadolobha, yize emboza cishe u-1% womhlaba, akhiqiza cishe u-80% woMkhiqizo Womhlaba Wonke futhi kudla cishe u-78% wamandla omhlaba. Ngaphezu kwalokho, zihlala ngaphezu kwengxenye yabantu bomhlaba. Ngakho-ke kubaluleke kakhulu ukuthatha izinyathelo ezisebenzayo ukuze bonke laba bantu bakwazi ukuphefumula umoya ohlanzekile kakhulu kunalokhu abaphefumulayo namuhla.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » Umphumela we- "heat island" uzophinda kabili izindleko zasemadolobheni zokushintsha kwesimo sezulu
Amakhorali aseHawaii asengozini yokunyamalala ekufudumaleni komhlaba
Amahora okulala athintekile ukuguquka kwesimo sezulu